I-Washbasin yangaphandle Iyasebenza Ngempela! Kepha Uma Unganaki Lawa Maphuzu ama-5, Kamuva Inkinga Eqhubekayo!
Ikhaya / Blog / I-Washbasin yangaphandle Iyasebenza Ngempela! Kepha Uma Unganaki Lawa Maphuzu ama-5, Kamuva Inkinga Eqhubekayo!
2021 / 04 / 06 UkwahlukanisaBlog 1249 0
Kuphazamisa kanjani ukuba nendlu yokugezela eyodwa kuphela ekhaya? Isibonelo, ekuseni ekuseni phakathi nesonto, kufanele aye endlini yangasese, kufanele ugeze, ngeke ukwazi ukwenziwa ngasikhathi sinye! Futhi ukwakhiwa kwendawo yokuwasha ngaphandle, kungayixazulula ngempumelelo le nkinga, hhayi nje kuphela ukuthuthukisa ukusetshenziswa kwendlu yangasese, kodwa futhi nokwehlukaniswa okuphelele kokumanzi nokomile, futhi okunobungani emindenini emincane ~
Umklamo wesitsha sokugezela ukukhipha indishi yokugezela ngaphandle kwendlu yokugezela, ithoyilethi neshawa endaweni eyodwa, indishi yokugezela kwenye indawo, lezi zikhala ezimbili aziphazamisani, ngenkathi ukusetshenziswa kwanoma yikuphi ukungqubuzana kungeke kwenzeke.
Ngoba indawo yokugezela incane, ngemuva kokuhambisa usinki ngaphandle, ingakhulisa indawo yendawo emanzi ngaphakathi, ingasabukeki iminyene kakhulu! Ngakho-ke inobungani emakhaya amancane.
Ngaphezu kokuqinisekisa ukwehlukaniswa okumanzi nokomile nokusetshenziswa kalula, isinki nayo ihlanzekile futhi ihlanzekile.
Ngaphandle kokuhlukaniswa okumanzi nokomile, amathawula, amabhulashi wamazinyo nezinye izidingo zansuku zonke, kuzoba sendaweni emanzi isikhathi eside, kulula ukuzala amabhaktheriya. Isinki izokhishwa, ngeke ibe khona inkinga enjalo, indawo engaphandle yomile kakhulu kunendlu yangasese.
Ngaphezu kwalokho, lapho wenza usinki ngaphandle, izingqinamba ezilandelayo akufanele zinganakwa.
Alikho ipayipi lokukhipha amanzi ngaphandle kwendlu yokugezela, ukuze uxazulule inkinga yamanzi aphezulu naphansi, ukwakhiwa kudinga ukudonsa ipayipi elime mpo kusinki kusengaphambili.
Uma ucabanga ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi akukuncane, indawo engaphandle kufanele ivinjwe amanzi! Udonga lukasinki nomhlabathi ongezansi kufanele upendwe ngokuvimbela amanzi ukuvimbela ukuvuza kwamanzi okuholela ekubeni manzi nokubumba odongeni.
Ngokuphathelene nobubanzi besendlalelo sokuvimbela ukungena kwamanzi, kungcono ukupenda indawo kusuka emhlabathini ngaphansi kwesinki iye ku-1.5m ngaphezulu kwendonga yosinki.
Udonga lunconyelwa ukunamathisela amathayili amahle, angithi, uma kuqhathaniswa nopende we-latex, iphepha lodonga nezinye izinto, ikhono lokuvimbela ukungena kwamanzi yilona elihamba phambili, kunamanzi afafazwe ekusuleni.
Njengezindonga, iphansi libuye linconywe ukusebenzisa ithayela, uma ufuna ukubeka phansi ukhuni, khumbula ukubeka itshe lombundu eliseduze nosinki, ukuze izinto ezimbili zithole umphumela wokwehlukana.
Isinki kufanele yenziwe emngceleni wamanzi ukuvimbela amanzi kuphephethi ukuthi ahlale phansi, kungcono ukukwenza ngaphambi nangemva, kepha futhi nokuvimbela amanzi ukuthi angene odongeni yigebe. Ungacabangi ukuthi umgoqo wamanzi awusebenzi, umphumela wokufakwa ngokuqinisekile ungcono kunokungafakwanga!
Ngemuva kokukhishwa kwesitsha sokugezela, ungazizwa ubala futhi ungathandeki, ngakho-ke uma kunesikhala esanele, ungenza ukwahlukanisa ukumboza, njengengilazi yohlaka olumnyama, ukwahlukanisa okungenalutho kuyisinqumo esihle ~
Edlule :: Leli yiBathroom, Lona Elisendlini Yakho Liyindlu Yangasese Nje - Izitayela Ezintsha Ekudizayineni Amakamelo Okugeza Ngo-2021 Olandelayo: I-3 ㎡ ~ 8 Design Idizayini Yokuhlobisa Umklamo, Izitayela Ezihlukile Onazo